Sharciyaqaan Muuse Cali: “Golaha Wasiirada la Cayriyey Dadka ha ka Xishoodeen, Shaqadana waxaa Masuul ka ah Agaasimayaasha” – Radio Daljir
Sharciyaqaan Muuse Cali: “Golaha Wasiirada la Cayriyey Dadka ha ka Xishoodeen, Shaqadana waxaa Masuul ka ah Agaasimayaasha”
Luulyo 23, 2017 6:15 g 0
Waraysi Sharciyaqaan Muuse Cali Jaamac iyo waa maxay sharciyada Golaha Wasiirada ee kalsoonidii lagala noqday? Magacee loogu yeerayaa? Xafiisyadooda ma tegi karaan? Yaa shaqada sii haynaya? Maxay se shaqadooda ku waayeen, sababtee?
Su’aalahaas iyo kuwa kale waxaan hordhignay Sharciyaqaan Muuse Cali Jaamac. Muuse ayaa ku tilmaamay in mid kastaa yahay “Wasiirkii Hore ee ….” dadka iyo dalkana aysan hadda wax masuuliyad ah u hayn, ayna ku habboontahay in ay dadka ka xishoodaan, damiirna yeeshaan, maadaama shaqadii loo igmaday ay guuldarro ka keeneen.
Wariye Xasan Heykal ayaa Waraystay.
Taliye Fu’aad Xanaano: “10 Burco ka Timid oo Daacish ah Baan Hadda Bossaso u Gudbinay”